It is me. Ko Niknayman.: ကျုပ်တို့ တစ်တွေ ဘာလုပ်ကြမှာလည်း။
ထမင်းကို ဟင်းလို့ ဆိုစရာ မယ်မယ်ရရမရှိ်ပဲ သားလေးသမီးလေးတွေကိုကျွေးပြီး စားပြီးချင်ယောင်ဆောင်ရတဲ့ မိခင်များ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေပါသလဲ။
သမီးလေး လှချင်တာကိုမတားနိူင်ပဲ တနေ့ သမီးလေးပြန်အလာမှာ ခေါက်ဆွဲထုပ်လေးတွေအ၀တ်လှလှလေး တွေ မြင်ရတော့ ရင်ကျိုးရပေမယ့် ဘာမှမမေးနိူင်ပဲ မျက်ရည်ကြားမှာ အဲဒီငရဲထမင်းလုတ်ပေါင်းများစွာ ဘယ် လောက်များတဲ့ မိဘများစွာ စားနေကြရပါသလဲ၊ ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့က ငါ့သမီး၊ ငါ့နှမတော့ မကောင်း တာလုပ်စားနေရတဲ့သူဖြစ်တဲ့ထဲမပါဘူး ဆိုပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြမလား။
ကျွန်တော်တိုတွေ ကွန်ပြူတာလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ ဒါတွေပြောနေချိန်မှာ၊ ကိုယ့်ကိုယုတ်မာ သမီးကိုမ ကောင်း တဲ့ဇာတ်သွင်း လင်ကိုထောင်ချနေကြတဲ့ လူတွေကို ကူသူမဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ အသနားခံနေတဲ့ အမေတွေ ဘယ် လောက်များနေပြီလဲ။
သားလေးကတော့ သာသနာမှာပျော်နေပြီ ကိုရင်ရယ်လို့ဆန်ကောထဲမှာ ဆန်ခပ်ရင်း ပုခုံးပေါ်က သဘက် အဟောင်းလေးနဲ့ ချွေးသုတ်နေတဲ့ ယာတောကမိခင်များ ရှင်သာမဏေလေး ပြန်လမ်းမရှိတော့တာမသိ နိူင်ခင်မှာ အရာအားလုံးပြီးဆုံးရတော့မှာလား၊ ပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ်ကြီးကို ဖွာရင်း ကြေးနီရောင်ထနေတဲ့ ပခုံးသား နဲ့ကွမ်းကြမ်းစားရင်း နွားနဲ့ ဖက်ရုန်းနေတဲ့ အဘကရော သားလေး ရှင်သာမဏေ မြစ်ရေထဲမှာ မျောပါ ပျံလွန်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့စကားတောင် မသုံးကြပဲ သတ်ရဲကြတာ သိပါ့မလား။
မြန်မာလူမျိုး အလုပ်သမားလေးတွေကို ပါးခေါ်ချတဲ့ ကိုရီးယားတွေ သူတို့ နိူင်ငံကရုပ်ရှင်ကားလေးတွေ ကြည့် ရင်းနဲ့ပဲ ကျနော်တို့ကိုယ်မပိုင်သော ကိုရီးယားအိပ်မက်လေးတွေ မက်ရင်း ကိုယ့်ဘ၀ကို ညာနေ ကြတော့မှာလား။
မြန်မာလူမျိုး ဘ၀အရ မလုပ်ချင်ပဲ လုပ်နေရတဲ့ စင်မြင့် ညများမှာ တင်ပါးကိုကိုင် ရင်သားကိုကိုင်ပြီး အထင် သေးတဲ့ ရာဂမျက်လုံးတွေနဲ့အဆီပြန်ပြန် မျက်နှာနဲ့ တရုတ်၀၀ကြီးဘေးက ပြုံးဖြဲဖြဲ စစ်ဝတ်စုံထဲက လူတွေကို ဆက်ကြောက်နေရင်း မေတ္တာတွေ ပို့နေကြယုံပဲလား။
အဲဒီဘ၀တွေ..အဲဒီဘ၀တွေ အဲဒီ အသက်မဲ့ ခန္ဓာနဲ့ အပြစ်မဲ့ ရှင်သာမဏေအလောင်းလေးတွေကျနော်တို့မဆိုင် သလိုကြည့် သက်ပြင်းချ မေ့ပစ် ဖြတ်လျှောက်သွားကြယုံလား။
ဒီဘ၀တွေ ဖျားနာနေပါတယ်၊ ဒီရောဂါကိုလဲ ဖယ်ရှားပျောက်ကင်းကုသတဲ့ လမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီတော့ သွေး နဲ့မျက် ရည်ပင်လယ်ဝေတဲ့ သာသနာထွန်းကားတဲ့တိုင်းပြည်မှာ စတေးခြင်းနဲ့သွေးရင်းပြီး သွေးချင်း တွေအတွက် တဖက်တလမ်းက ဖြစ်နိုင်သမျှ ကူညီကြရအောင်လား။
ကျနော်တို့ မေတ္တာတွေတကယ်ထိရောက်ချင်ရင်...အသက်တွေပေးကြရအောင်လား။ ညစ်ပတ်နံစော်တဲ့ ချောင်း ရေ ပုပ်ပုပ်ထဲမှာ လှုပ်ယုံလေး ရေလှိုင်းပုတ်လို့ လှုပ်နေတဲ့ ရဟန်းငယ်လေး ရုပ်ကလာပ်ကို မမေ့ ကြ ပါနဲ့။
အလုပ်သမားတွေ လယ်သမားတွေ အေးချမ်းစွာနေတဲ့ တိုင်းပြည်၊ ငါဒို့ တွေမမုန်းတတ်ကြပါဘူး၊ ဒါပေ မယ့်နာကျင်တတ်တယ်။
မြန်မာပါ့စ်ပို့ စာအုပ်နီကိုမြင်ရင် လေဆိပ်တိုင်းက သူခုိးဓါးပြကိုဆက်ဆံသလိုလဲ ခံခဲ့ကြရဖူးမှာပါ။တိုင်းပြည် ကိုချစ်ဖို့ နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်စရာမလိုပါဘူ။ ဒါပေမယ့်နှလုံးသားရှိဖို့ လိုတယ်၊ မျက်ရည်ရှိဖို့ လိုတယ်။ သွေးရှိဖို့ လိုတယ်။ ပြီးတော့…အောင်ပွဲကိုလဲ တိုက်ယူရဲဖို့ လိုပါတယ်။
ပထမအဆင့်ကတော့ ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ oppositeye (နေလင်းမောင်) တို့သာကီနွယ်တို့ ဆိုတာ အပါအ၀င် န.အ.ဖ အ၀န်းအ၀ိုင်းနဲ့ ငါဖားရင်တော့ ကောင်းစားမှာပဲထင်တဲ့ (ဗို်လ်ခင်ညွန့်တို့ကြည့်ပြီး သံဝေဂမရ တတ် သေးတဲ့ ) သူတို့ လိုလူများရဲ့ ဆိုက်တွေကို မသွားခြင်းဖြင့် စကြတာပေါ့။
သူတို့ ကိုရောဖို့ မလိုဘူး အသိအမှတ်ပြုဖို့ မလိုဘူး။ .ကျနော်တို့ တွေ လမ်းဘေးက မ၀ရေစာစားပြီး တအီအီ အော်နေရှာတဲ့ ခွေးဝဲစားလေးတွေကို သနားတတ်တဲ့လူမျိုးပါ။ လူရာမသွင်းနဲ့ စကားထဲထည့်မပြောနဲ့။
ဖွတ်တကောင်နဲ့ ဇာတကဇာတ်တော်ကိုဆွေးနွေးလို့ မရပါဘူး။ ပုတ်သင်တကောင်နဲ့ ဘ၀အရေးပြောလို့ မရပါဘူး။
သူတို့ ဘာသာရပ်နဲ့ လူထုဘာသာရပ်မတူပါဘူး။
စင်္ကာပူလူမျိုးသူဌေး တရုတ်လူမျိုးသူဌေး မ၀ရေစာလေးပေးပြီး၊ ခြေတော်တင်ထားခံရတဲ့ တအိမ်ကျော်က စာ ရေးမလေးကို အပေါစားအဖြစ် အပြစ်တင်နေတာထက် သူတို့ ဘ၀တွေကို ဘယ်လိုကူညီကယ်တင်မလဲ ဆိုတာ အာရုံစိုက်ကြပါစို့ ။
ဒို့ တိုင်းပြည်နိမ့်ရင် ဒို့သူများနိုင်ငံမှာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးပဲ ဖြစ်နေပါစေ ဒို့ဘ၀တွေမှေးမှိန်ပါတယ်။ ကိုယ့်လူ မျိုးနိမ့်ကျနေတာ ကိုယ်မပါဘူးဆိုတဲ့အချိုးနဲ့ နှုတ်ခမ်းတလပန်းတလံ ပြန်ဝေဖန်ကြတဲ့အကျင့် ၊ ဒို့သူငယ်ချင်းက ဘယ်သူ့သမီးလေ ဘယ်လောက်ချမ်းသာတာ၊ သူ့အဖေက ဘာကောင်ဆိုတာလောက်ကိုပဲ ပြောပြီး၊ လွယ် လွယ်ဘက်ပြောင်းတတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုဖျောက်ကြပါစို့ ။
အသက်ရှိသော သတ္တ၀ါတိုင်းဟာ ကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ ကျုပ်တို့ လဲကြောက်တတ်တယ်။ ဒါကိုလဲအသိအ မှတ်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြောက်တတ်တဲ့ ကြားက အမှန်တရားတခုအတွက် ရပ်တည်ရဲတာမှ လူပီသ ပါတယ်။ လူဆိုတာတသက်မှာ တခါပဲသေပါတယ် တခါပဲမွေးပါတယ်။ မွေးခြင်းသက်သက်ကလဲ သိပ်ပြီးတော့ ခမ်းခမ်း နားနား အဓိပ္ပါယ်မရှိလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ဘ၀ကို ကိုယ်တိုင် သေခြင်းတရားဆီကို ဒူးတွား တွားရင်း ဖန်တီးထုဆစ်ကြရတာပါ။ ဒီတော့ဘယ်လို ကိုယ့်ဘ၀ကို ပြဌာန်းမလဲ။
လာချင်ရင်လာပါ၊ ကံကြမ္မာတူတူ၊ ငါတို့ကို ရိုက်သူများကို နာကျင်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ သွေးချင်းချင်းနီသော ဦးခေါင်း တွေမငုံ့တန်း ရဲရဲကြည့်နိုင်တဲ့ သတ္တိရှိတယ်ဆိုရင်၊ ရရာနည်းနဲ့ လက်စားချေချင်း မဟုတ်ပဲ လုပ်သင့်တာကိုလုပ်တဲ့အနေနဲ့ ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရဲမယ်ဆိုရင်၊ တော်လှန်ရေးဆိုတာ သေနတ်ပါမှ တော် လှန်ရေးမဟုတ်ဘူး။
အနုနည်းတော်လှန်ရေး၊ ဥက္ခောတရားနဲ့ တော်လှန်ရေးပဲ။ ရဟန်းတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေး၊ မပြီးပြတ် သေးတဲ့တော်လှန်ရေးဟာ ဥပေက္ခာတရားနဲ့ ဆင်နွှဲခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ဆရာစံဆိုတဲ့ လယ်သမားတစ်ယောက်ဟာ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကို ကွမ်းမန်းထုံးမန်းတွေစီရင်ပြီး အပီအပြင်ငှက်ကြီး တောင် နဲ့ လက်သီးထောင်ပြီးတော်လှန်ခဲ့တာပါ။
သခင်ဖိုးလှကြီးဆိုတဲ့ အလုပ်သမားကြီးဟာ တွင်းတူးကိရိယာတွေကလွဲလို့ ဘာလက်နက်ဆိုတာမှ မရှိပဲ ရန်သူ့ ကို မင်းဘာကောင်လဲ ဆိုတဲ့ ထီမထင် ရဲသွေးနဲ့ တွန်းလှန်ခဲ့တယ်။
ကဲ…ကျုပ်တို့ကရော ဒီစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ ???????
(ရေးသားတင်ပြသူ - MTY)။
Posted by Ko Niknayman at 11:11 AM